Sawirro+Warbixin: Mashruuc Biyo Gelin Oo Ay Ku Baxday Lacag dhan $94,500 oo Laga Hirgaliyay Magaalada Jilib
Thursday December 14, 2017 - 18:48:30 in Wararka by
Munaasabad lagu soo bandhigayay gunaanadka mashruuc biyo galin oo loogu magac daray Al-aqsaa ayaa waxa kasoo qeyb galay marti sharaf kala duwan odoyaasha iyo salaadiinta deegaanka, masuuliyinta wilaayada Jubooyinka iyo qeybaha bulshada ee ku dhaqan d
Mashruucan oo soo socday mudo kudhow sagaal bilood ayaa soo maray dhowr marxaladood oo kala duwan marxalada koowaad ayaa lagu guuleystay in lagu qodo ceel biyood laguna dhiso barkad weyn oo biyaha lagu keydiyo taas oo qaadi karta 1300 oo fuusto oo biyo ah, waxaana ku baxay qarash dhan 47,500 oo lacagta dollarka ah.
Ugu horeyn munaasabada waxaa ka hadlay Injineerkii gacanta ku hayay dhismaha barkadda waxa uu sharaxaad ka bixiyay qaabka loo dhisay iyo waxqbadkeeda.
Sidoo kale qaar kamid ah odoyaasha dhaqanka iyo salaadiinta deegaanka ayaa iyaguna ka hadlay hormarka ay ku tilaabsatay degmada Jilib, farqiga u dhexeeya xiligii hore iyo hadda iyo waxqabadka maamulka islaamiga ah ee wilaayada jubooyinka.
Kheekh Maxamed Abuu Cabdallah waaliga wilaayada Jubooyinka oo xafladda ka qeyb galay ayaa dhankiisa sheegay in horumar la taaban karo ay tiigsaneyso degmada Jilib waxaana uu ka sheekeyay biyaha nadiifka ah ee hada ay heystaan bulshada kudhaqan degmada jilib.
Si kastaba ha ahaatee maamulka islaamiga ah ee wilaayada Jubooyinka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si weyn ugu mashquulsanaa wax qabad kala duwan oo loo fidinayay bulshada kuwaasi oo ay kamid yihiin dayactiro lagu waday kannaalo duugmay iyo qodista faro biyaha wabiga qaada, waxana ugu dambeeyay mashaariicdaasi midkan biyo galinta ee wilaayada ay ka hirgalisay degmada jilib.
Halkan ka dhageyso Warbixinta Guji ama Youtube